Xilka Bulshada Ka Saaran Difaaca Hay’adaha Gargaarka “Dhageyso” | Radio Muqdisho
Xilka Bulshada Ka Saaran Difaaca Hay’adaha Gargaarka “Dhageyso”
Published on October 29, 2012 by admin · No Comments · 2,515 views
Dalkenna Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aan gacmeheennna ku keensannay sida colaadaha iyo Nabaad guurka iyo dhibaatooyin rabbaani ah balse iyaga naftoodu ka dhashay xigmad gefafka aan galnay, sida abaaraha , Fatahaadaha iwm.
Muddadii uu dalkeennu dhex muquuranayay colaadaha iyo loollanka siyaasadeed, waxaa howlo wanaagsan dalka ka hayay hay’ado sama fal oo caalami ah, kuwaas isugu jira kuwo caalami ah iyo kuwo ahli ah.
Hay’adahani waxay bulshooyinka ku dhaqan gobollada dalka u hayeen howlo dhaxal gal ah, sida adeegyo caafimaad, Waxbarasho iyo quudin lacag la’aan ah.
Waxaa la dhihi karaa hay’adaha gargaarku waxay qeyb ahaan buuxiyeen kaalintii dowladdu banneysay muddadii burburka.
Laakiin waxaa nasiib darro noqotay in hay’adaha samafalka lagula kacay falal isugu jira Dil, Afduub, Hanjabaad , Boob iyo ugu dambeyn in la joojiyo adeegyadii ay bulshada u hayeen .
Kooxda Alshabaab ayaa mamnuucday guud ahaan hay’adihii gargaarka ee ka howl galayay goobihii ay gacanta ku haysay, xilli ay dadku baahi iyo cudurro u dhammaanayeen.
Maalmo ka horna kooxda sii liicaysa waxay Hay’adda Islamic Relief ka mamnuucday in ay gargaar gaarsiiso Hal milyan iyo Bar Soomaali ah.
Waa maxay xilka bulshada ka saaran difaaca hay’adaha gargaarka, waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cali Sheikh Maxamuud ‘Sheikh Cali Dheere”
TUBTA TOOSAN 29.10.2012